१५ बर्षे सुरेश पनि जनगुनासो सुन्न सडकमा, रबिले भेटेपछि यसो भने उनलाई….. – पुरा पढ्नुहोस्……
१५ बर्षे सुरेश पनि जनगुनासो सुन्न सडकमा, रबिले भेटेपछि यसो भने उनलाई…..
ईटहरी/ देश निर्माण र बिकास र जनताको गुनासोमा सरकारको उपस्तिथि खासै फलदायी नभई रहेको अवस्थामा विभिन्न ब्यक्ति तथा सस्था यसको लागि सक्रिय भइ लागेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणमा पर्छन् ‘धुर्मुस-सुन्तली’ र ‘रबि लामिछाने’ ।
उनिहरुले जनताको पीडा बुझ्दै देश बिकाश, निर्माण र जनताको पिडामा मलम लगाउन खटिएका छन् । यस्तैमा उनिहरुलाई नै पछ्याउँदै १५ बर्षे बालक पनि जनताको गुनासो सुन्न लागेका छन् ।
उनले जनताको गुनासो सुन्दै त्यसलाई सरकार समक्ष पुर्याउने र समाधानको बाटो समेत खोज्ने कार्यमा लागेका छन् । उनी हुन सुरेश तिमिल्सिना ।
पिता कुष्ण प्रसाद तिमल्सिना र माता मोहमाया तिमल्सिनाको कोखबाट बिक्रम संम्बत २०५८ सालमा सिन्धुपाल्चोको बारबिसे नगरपालिका ९ राम्चेमा जन्मिएका हुन् ।
उनले आफै भित्र बिश्वास र आट बोकेर यो कार्यमा लागेपनी एक्लै अघि बढ्न गाह्रो हुने भएपछि उनले पत्रकार रबि लामिछानेलाई समेत भेटेका छन् । गत सनिवार करिब २ बजे उनले २० मिनेट जति रबि संग भलाकुसारी गरे । भेटमा रबिले आफुलाई ‘देशमा तिमी जस्ताको खाचो छ, कसैको कुरा नसुन’ भन्दै भरपुर साथ र सहयोग गर्ने वचन दिएको उनले हामिलाई सुनाए ।
सुरेश भन्छन् ‘लाखौंले असम्भब मानेको यो कुरालाई म सम्भब तुल्याएर छाड्नेछु, मानिस हो जे नि गर्न सकिन्छ मुत्यु समक्ष पुगेको ब्यक्ति त सकुशल बनाउन सकिन्छ भने के यो कार्य गर्न असम्भब छ ??” एउटा कलिलो बालकोको यो आट र साहसलाई सबैले स्विकार्नै पर्छ । उनको यो कार्यमा सबैको साथ र सहयोग पुगोस्, हाम्रो सुभकामना ।
Prevआज बिहान पशुपतिनाथको मन्दिरमा यस्तो पनि देखियो ! अत्यन्तै दुर्लभ भिडियो !!
Nextहाँस्य कलाकार विल्सन राई ‘तक्मे बुढा’ सवार गाडी दुर्घटनामा
तेरिया मगर डान्सर नभएको भय पक्कै पनि गायिका हुन्थिन, हेर्नुहोस यो सार्है मिठो गित(भिडियो सहित)
टिकटक बाट भाइरल भएका जुम्ल्याहा दिदीबहिनी प्रिन्सी र प्रिज्माको पहिलो म्युजिक भिडियोको सूटिंग यसरि भयो, शिशिर भण्डारीले ४ लाखको सेटमा दिदीबहिनीलाई यसरी नचाए : अन्तर्वार्तामा प्रेमी देखि बिहेको यस्तो खुलासा गरे..हेर्नुहोस ( भिडियो सहित )
‘अँध्यारो किन भयो भनेर १० बर्षसम्म थाहा नपाउनेलाई चिनौं र जेलको अँध्यारोमा धकेलौँ’-सिधाकुरा जनतासंग
आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रले शुरु ग¥यो ‘स्वस्थ जीवनशैली परामर्श क्लिनिक’ पुरा बिबरण हेर्नुहोस